musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tanzania Breaking News » Rhino Tourism yakaziviswa muTanzania Mkomazi Park
tsika nemagariro • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mkomazi National Park iri kuchamhembe kweTanzania yakaiswa mucherechedzo kuRhino Tourism, yakanangana nevashanyi vanofarira kuona chipembere chitema chemuAfrica, izvozvi mhuka dzesango dziri panjodzi dzepasi rose.
Gurukota rinoona nezve zviwanikwa nekushanyirwa, Dr. Damas Ndumbaro, vakaparura Rhino Tourism muMkomazi National Park neChitatu svondo rino.
Bazi rinotarisira kunongedza nekukwezva vashanyi vanofarira kuenda pamufananidzo chipembere safaris.
Gurukota iri rinoti kuunzwa kweRhino Tourism chikamu chechirongwa chehurumende yeTanzania.
Chinangwa chehurumende kukwezva vashanyi vanosvika mamirioni mashanu izvo zvinobva zvawedzera mari dzekushanya kubva pamadhora mazana mana emadhora mazana maviri nematanhatu kusvika pamabhirioni matanhatu pagore ra5
Inowanikwa kuchamhembe kweTanzania Yevashanyi Dunhu padhuze neGomo reKilimanjaro, Mkomazi National Park yakagadzwa seRhino Sanctuary uko vashanyi pasi rese vangashanyira vozoona chipembere chitema cheAfrica chisinga dzivirirwe mukati mepaki.
Mkomazi iri pasi pe manejimendi ye Tanzania National Parks (Tanapa). Inowanikwa makiromita 112 kumabvazuva kweguta reMoshi mudunhu reKilimanjaro, pakati penzvimbo dzekuchamhembe nekumaodzanyemba safari.
Kushanya kweRhino kunogona kusanganiswa nyore nyore nekufamba musango dziri pedyo dzeUsambara kana Pare makomo uye mazuva mashoma ekuzorora pamahombekombe eIndian Ocean eZanzibar.
Kuchengetedza zvipembere chinhu chakakosha chakatariswa nevatarisiri vezvokuchengetedza kuti vapone muAfrica mushure mekuvhima zvisiri pamutemo izvo zvakaderedza huwandu hwavo mumakumi emakore apfuura.
Zvipembere nhema dziri pakati pemhuka dzakabatwa zvakanyanya uye dziri panjodzi muEast Africa nehuwandu hwadzo huri kudzikira pamwero unotyisa.
Yakatarisana neGomo reKilimanjaro kuchamhembe uye Tsavo West National Park muKenya kumabvazuva, paki yeMkomazi ndiyo yava yekutanga mhuka yemusango muEast Africa yakanangana nekushanyirwa kwezvipembere.